चन्द्रमा सिंह राशिमा, आज कुन दिशातर्फको यात्रा शुभ रहनेछ ? « Khabarhub
चन्द्रमा सिंह राशिमा, आज कुन दिशातर्फको यात्रा शुभ रहनेछ ?
आज मिति २०७७ कात्तिक २४ गते सोमबार, इस्वीसंवत नभेम्वर ९ तारिक सन् २०२०, श्रीशाके १९४२, नेपाल संवत् ११४०, प्रमादी नामको संवत्सर:, सूर्य पृथ्वीको दक्षिणी गोलाद्र्धमा छन् । शरद ऋतु चलिरहेको छ । चान्द्रमान अनुसार कात्तिक कृष्ण पक्ष चलिरहेको छ ।
सौरमान अनुसार आज कात्तिक कृष्णपक्षको नवमी तिथि रहनेछ । आज मघा नक्षत्र, विष्कुम्भादि योगमा ब्रह्म, करणमा तैतिल, आनन्दादि योगमा ध्वांक्ष रहनेछ ।
सूर्य तुला राशिमा, चन्द्रमा सिंह राशिमा रहनेछ । आज दिनमान २७ घटि ०९ पला अर्थात १० घण्टा ५५ मिनेटको रहनेछ । आज सूर्योदय काठमाडौं केन्द्र विन्दुमा रही बिहान ६ बजेर २१ मिनेटमा मित्र मुहूर्तमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ ठीक ५ बजेर १३ मिनेटमा हुनेछ ।
चन्द्रमा सिंह राशिमा छन् त्यसैले उत्तर बाहेक अन्य दिशाको यात्रा शुभ छैन । आज सोमबार परेकाले पूर्व दिशाको यात्रा गर्दै नगर्नुहोला । यदि बाध्यता नै छ भने धार्मिक उपाय अपनाएर मात्र यात्रा गर्नुहोला ।
शुभ बेलामा अमला वा सक्खर खाएर यात्रा प्रारम्भ गर्नुुहोला । साथै पुरुषको नेतृत्वमा उत्तर पूर्व तथा स्त्रीको नेतृत्वमा वायव्य अर्थात उत्तर पश्चिम र ईशान अर्थात उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा गर्दा राम्रो हुनेछ । यदि तपाइँ विशेष यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ दिशामा मात्रै गर्नुपर्दछ ।
बिहान ६:१९ बजेदेखि ७:४१ बजेसम्म अमृत बेला
बिहान ७:४१ बजेदेखि ९:०३ बजेसम्म काल बेला
बिहान ९:०२ बजेदेखि १०:२५ बजेसम्म शुभ बेला
बिहान १०:२५ बजेदेखि ११:४७ बजेसम्म रोग बेला
बिहान ११:४७ बजेदेखि १:०९ बजेसम्म उद्धेग बेला
दिनमा १:०९ बजेदेखि २:३१ बजेसम्म चर बेला
दिउँसो २:३१ बजेदेखि ३:५३ बजेसम्म लाभ बेला
दिउँसो ३:५३ बजेदेखि ५:१५ बजेसम्म अमृत बेला
राहुकाल समय : बिहानमा ७:३० देखि ९:०० बजेसम्म राहुकाल समय रहनेछ । यो समय भित्र यात्रा, लेनदेन, ठूलो लगानी, नयाँ निर्णय केही पनि गर्नु परिणाम राम्रो हुँदैन ।
प्रकाशित मिति : २४ कार्तिक २०७७, सोमबार ७ : ०६ बजे